Ịdị ndụ na United Arab Emirates - Ọ bara uru ịhọrọ? |
Kedu ihe kacha mma ị ga-ede na Blockchain na Dubai?
Ịdị ndụ ebighị ebi na Dubai
Ụgha na Ime Anwansi nke Ịga nke Ọma na Dubai!
Ebighebi n’ime United Arab Emirates E hibere ya na 1978, ma e mere ya iji nyere onye ọ bụla chọrọ ọdịnihu ka mma aka iru ya. N'aka nke ozo, ọ bụ ụlọ ọrụ ijeri dollar ijeri ugbu a ya na nde nde rue mgbe ebighi ebi Business Ndi nwe uwa nile.
Site na ebumnuche a, Ọ dị mfe ịmalite azụmahịa Ruo Mgbe Ebighị Ebi. N’adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ azụmaahịa netwọkụ, ego adịghị akwụ ụgwọ kwa afọ ọ bụla. Ọzọkwa, nke a bụ ụlọ ọrụ ama ama. Yabụ, n'ozuzu ikwu okwu, ị ga-enwe a Ohere dị elu iji zụlite ọrụ gị ma kpalie onwe gị.
Ozugbo ị debanyere aka na ị ga - enweta:
Onye nchịkwa nke onwe na onye nkụzi.
Nkwado dị ịtụnanya na ahia.
Nkwado zuru oke site na ụlọ ọrụ a na-achịkwa nke ọma.
Nnukwu ihe nkwado.
Akwụkwọ ikike ịnwaghị ahia mba ofesi.
N'okpuru ebe a, e nwere ihe ndị ọzọ mere ị ga - eji bụrụ Onye Nwe Ahịa Ebighị Ebi ohere kwesiri itinye ego na ya.
Ụlọ ahịa na-ere ahịa nke ukwuu, nke na-eto eto site n'ike ruo ike.
Ndụ Ebighị Ebi nwere ijeri $ 1.5 ijeri na akụ ma bụrụ ụlọ ọrụ bara ụba, ụlọ ọrụ na-akwụghị ụgwọ, na-eto mgbe niile n'oge afọ 41 nke ahia.
Ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ, ohere azụmahịa zuru ụwa ọnụ
Site na isi ụlọ ọrụ na mba 160, Forever nwere ngwá ọrụ ụwa nke na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịmepụta azụmahịa na zuru ụwa ọnụ. Maka onye ọchụnta ego nwere nnukwu olile anya ọ ga-ekwe omume iwu azụmahịa na-aga nke ọma n’ụwa niile.
Mee ka ego a na-akwụ ụgwọ ruo mgbe ebighị ebi
Otu uru kasịnụ nke Ndụ Ebighị Ebi network ihe omuma ahia ma na ya n’enweta ego ebighi ebi. Ị nwere ike enweta ọrụ na Ndị Isi Nweta Ahịa Ebighị Ebi na Dubai.
N'ime ọnọdụ ndị ahụ, gị na ndị otu gị ga-akpọbata ahịa ma na-aghọrọ mkpụrụ ya uru nke ndọgbu gị. Dịkwa ka ekwuru na mbụ, ụlọ ọrụ a dị mma ịnwe ịmalite. Yabụ, n'ọnọdụ ndị ahụ, lee anya n’ihe ị nwere ike ịtụ anya na ogologo oge na Dubai.
The Forever Marketing Atụmatụ abụghị nke abụọ
Inye ego n’enweghi ego, ihe agbamume - tinyere ego ego na njem zuru ụwa ọnụ ọbụna na Dubai. Ọzọkwa, uru ego ga-adịte aka dị ịtụnanya na ezigbo ndu ndu. Ruo mgbe ebighi ebi ịdị mfe ya na ọkaibe ya na-enye gị ohere ijide ya. Ọ bụ nfe; rụọ ọrụ maka ịre ahịa, lee nsonaazụ.
Ọ dị mma, ụlọ ọrụ a bara uru inye ihe iji nwaa ogologo oge, nke ahụ bụ eziokwu. Ndị mmadụ niile nọ gburugburu ụwa niile na-ekwu maka ịnye kpakpando 5 nyocha gbasara mgbasa ozi niile. Yabụ, Ibi na United Arab Emirates na-ekwukarị ezigbo ohere iji nweta ego.
Ngwaahịa mbụ na ọrụ mmepe
Na-arụpụta oge ma na-ere ezi ahụ ike na ọdịmma ahụ, nke dabere na ezigbo aloe vera. Uzo ahia di iche di iche-iche nke elu alo alo nma ihe nile biara na ya Nkwekọrịta ego ego 60 ụbọchị.
N'aka nke ozo, udiri anumanu di na ndu ebighi ebi, n’aka nke ozo putara na enwere ngwaahịa maka ụdị ndị ahịa dị iche iche:
Yana, Ijikwa ibu.
Ihe ọ andụ andụ na mọ.
Nlekọta onwe onye.
Nlekọta anụ ahụ.
Banyere Business na Dubai
Ruo mgbe ebighi ebi na-enye ndị mmadụ nkịtị ohere iji wulitere onwe ha ọdịnihu nchebe na ndụ, n'ime ụwa ebe ịnọghị nchekwa nwere ike iyi siri ezigbo ike inweta.
N’ebe a anyị na-enye ohere ịmalite azụmahịa jiri ezigbo ike, ego enwetaghị ego na nsonaazụ egosipụtara ebe ị ka nwere ike nweta ihe ahụ izu ike ọrụ zuru oke na onye obula gbara mbo inweta.
Kedu ka esi amalite ịrụ ọrụ maka Forever Living in Dubai?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ akụkụ nke Ndụ Ebighị Ebi, biko mee kpọtụrụ anyị ịghọ otu n'ime anyị Ndị na-ere ahịa. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na United Arab Emirates. Anyị na ụlọ ọrụ anyị, n'ozuzu ha na-ekwu, anyị nọ ebe a iji nyere gị aka inyocha ihe ndị ọzọ Banyere Ebighị Ebi, ebe ị nwere ike ịgụ akụkọ banyere etu ndị mmadụ siri ghọọ FBO na ihe kpatara ha jiri kpebie ibido Ịga njem.
Companylọ ọrụ a, n'aka nke ọzọ, anaghị arụ ọrụ naanị na United Arab Emirates. Nwere ike ịnweta ohere na-adọrọ mmasị site na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla n'ụwa.
Ọ bụ iwu na-akwadoghị onye na-akwalite ma ọ bụ onye na-esonye na atụmatụ azụmaahịa iji mee ka onye ọ bụla kwụọ ụgwọ site na-ekwe nkwa uru site na ime ka ndị ọzọ sonye na atụmatụ ahụ. Ekwela ka a ghara iduhie gị site na nkwuputa na ị na-enweta nnukwu ego dị mfe. Ruo mgbe ebighi ebi bu onye otu Direct Selling Association na UK na esenidụt ohere.
Jikọọ na Shah - Ruo mgbe Ebighị Ebi na-ere ahịa
Ọzọkwa, Ndụ Ebighị Ebi bụ ugbu a enyere ndị mmadụ nọ na United Arab Emirates na United Kingdom. Biko jikọọ na Shah Hadi, onye nnọchianya na-ahụ maka ndụ ebighi ebi.
Ndị otu anyị ga-eme nyere gị aka ịmalite ọrụ ọhụụ na Qatar ma ọ bụ Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike nweta ugbu a nduzi, Atụmatụ na ọrụ na United Arab Emirates na iji asụsụ gị.